Menmụ nwoke na Womenmụ Nwaanyị Hà Na-ahọrọ Agba Dị Iche? | Martech Zone
Anyị egosipụtala ụfọdụ ezigbo infographics na otú agba mmetụta purchasezụ omume. Kissmetrics amalitekwala infographic nke ahụ na-enye ụfọdụ ntinye maka ịchọọ otu okike.
O juru m anya na ndị iche… na oroma e lere anya dị ka ọnụ ala!
Nchoputa ndi ozo na agba na okike
Blue bụ ihe a na-ahụkarị agba ọkacha mmasị n'etiti ndị nwoke na ndị nwanyị.
Green na-egosipụta mmetụta nke ntorobịa, obi-ụtọ, ịhụnanya, ọgụgụ isi, na ume.
Ndị nwoke na-achọkarị ịmacha agba, ebe ụmụ nwanyị na-adụ ụda nro dị nro.
20% nke ụmụ nwanyị aha ya bụ aja aja dị ka agba kachasị amasị ha.
Site n'ụbọchị ebubata ụmụ ọhụrụ n'ụlọ ha ma tinye ha na akwa mkpuchi pink ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ ha, enwere mmetụta banyere nwoke na nwanyị na agba. Ọ bụ ezie na enweghi iwu doro anya gbasara ụdị agba bụ naanị nke nwanyị ma ọ bụ nke nwoke, enwere ọmụmụ e mere n'ime afọ iri asaa gara aga nke na-adọta ụfọdụ okwu.
Agba nwere ike ịnwe mmetụta dị egwu na echiche na akparamàgwà nke ndị na-azụ ahịa. Ọzọkwa, ọ nwere ike inwe mmetụta site na okike.
Tags: achromaticunereacha anụnụ anụnụagba agbaaja ajabọbụl gọmkantalupebibiose cayenneọnụ alacloveragbaeggplantagba ọkacha mmasịnwanyifernnriokikemkpụrụ vaịngreenmmanụ awụna-enweghị ucheUdogbelavenderopekempe agbaoroma nkịrịsịoroma nkịrịsịmagentanwokemaraschinomaroonakpaetuoromaorchidpinkplọmPurpleredsalmọnụfụfụ oké osimirindòigweagba dị nrospindriftmmiristrọberịtanjerịntiiagbaturquoise
Ihe mere ị ga-eji tinye ego na Infographics ozugbo
Sep 5, 2017 na 3:16 PM
chaatị ndị a achịcha na-eduhie eduhie…. Na-egosipụta ma ọkacha mmasị na obere ọkacha mmasị agba na otu achịcha chaatị dị iche iche nke na-enweghị uche. Mbadamba achịcha kwesịrị igosipụta akụkụ dum, na nke a, "ọkacha mmasị" na "ọkacha mmasị kachasị" bụ "wholes" dị iche iche